Sidee loo Isticmaalaa Ganacsiga Pinterest si guul leh? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo adeegsadaa ganacsiga Pinterest si guul leh?
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 391
Kuwa u heellan suuqgeynta Pinterest, ogow in koontada ganacsiga ee tan dalabku wuxuu ku siinayaa faa iidooyin aad u wanaagsan heer ganacsiSu'aashu waxay tahay ma yaqaanaan sida looga faa'iideysto.Maamulka koontada ganacsiga ayaa xoogaa jilicsan, maaddaama maamulkan uu yahay waxa horseedi kara guusha ama guuldarada shirkadda ku lugta leh howsha.
Tilmaamaha qaar ee qoraallada:
Meel ku dhig meesha ay tahay inay ahaadaan:
Waa muhiim in markasta oo aad daabacdo biin, ku dheji aagga saxda ah, habkan macmiilku wuxuu u awoodi doonaa inuu si fudud u helo, xusuusnow in adduunka maanta aan haysanno waqti yar maalin kasta, waqtigu wuxuu u beddelaa lacag dad badan.
Biinanka isku dhafan:
In kasta oo ay jiraan badeecooyin kaladuwan oo suuqa yaalla, had iyo jeer waa inuu jiraa iswaafajin shirkadeedTan macnaheedu waa, haddii lagugula talinayo inaad haysato alaabooyin cusub, laakiin sidoo kale waa inaad haysataa alaabada ugu guulaha badan, marka waxaa lagugula talinayaa inaad iskudarsato daabacadaha oo aad dib u daabacdo qaar ka mid ah kuwii hore ee guuleystay.
Daraasado badan ayaa la caddeeyay saacadaha ugu mashquulka badan Shabakada waa inta udhaxeysa 5 galabnimo ilaa 9 habeenimo, waxay udhaxeysa waqtigan inta ugu badan ee lagugula talinayo soo saarida biinanka cusub, waa waqtiga ay dadku nastaan ​​oo ay qaataan waqti in ay isku mashquuliyaan.
Kani waa mid ka mid ah codsiyada bixiya aaladaha wax iibsiga ugu badan ee adeegsadayaasheeda, taasi waa, ma daabici kartid oo keliya biinanka, waad daabici kartaa xiriiryada la xiriira biinanka leexinta macmiilka websaydhka shirkadda, badhannada iibsiga, taas oo u oggolaanaysa macaamilka inuu si fudud isu barbar dhigo.
Kuwani waa laba ka mid ah qalabka arjigu ku siiyo, Waxaan kugula talinayaa inaad ogaato iyaga oo aad ogaato sida ugu habboon ee ugu habboon ee aad ugu adeegsan karto shirkaddaada.
Sawiradu waa waraaqdaada daboolka iyo qalabka soojiidashada ee macaamiisha suurtagalka ah, waxaan kugula talinayaa inaad u adeegsato si aad uga faa'iideysato, oo kaliya inaadan ka dhigin kuwa soo jiidasho leh cabirka kiiskani wax badan buu tarayaa. Waxa ugu badan ee lagula taliyay ayaa ah in sawirradu ay leeyihiin cabbir dhexdhexaad ah, dherer ah oo ku habboon mid kasta oo ka mid ah meelaha ay ku yaalliin bogga.
Waxaa jira cabirro lagu taliyay mid kasta oo ka mid ah meelaha madasha ku yaal iyo nidaamkeeda ayaa kuu soo jeedin doona iyaga sida aad ugu gudbinayso barta.
Tani waa wax ay macaamiisha ogaadaan, inta jeer ee ay qabtaan dhajinta dhajinta iyo soo celinta, Xaqiiqda ah in joogitaankaaga lagu arko barta dhexdeeda waxay u muujin doontaa macaamiisha iyo macaamiisha mustaqbalka in aad xiiseyneyso ganacsigaaga, inaad fiiro gaar ah u leedahay wixii ku dhacay iyo isbeddellada shabakadda.
1 Tilmaamaha qaar ee qoraallada:
2 Biinanka isku dhafan:
4 Qaabka sawirka:
Sidee loogu xayeysiiyaa Pinterest si wax ku ool ah?
Xaqiiqooyinka Pinterest runti ma caawiyaan?